Nayakhabar.com: जन्मदिनमा हजुरआमालाई भेट्न घर फर्किए धुर्मुस
जन्मदिनमा हजुरआमालाई भेट्न घर फर्किए धुर्मुस
कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को आज जन्मदिन हो । वि.स २०४० सालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचाबेतघारी गाविसको वडा नं ७ मा जन्मिएका धुर्मुसले २०६५ साल मंसिर १४ गते कलाकार कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ सँग बिवाह गरेका थिए । उनीहरुले पहिलो सन्तानको रुपमा छोरीलाई जन्मदिएका छन् ।
हाँस्य टेलिफिल्म ‘मेरी बास्सै’ बाट चर्चित बनेका धुर्मुस र सुन्तली बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ढलेका बस्ती निर्माणपछि जनजनको मनमा बस्न सफल भएका छन् । उनीहरु यतिबेला सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौर बस्ती निर्माणमा व्यस्त छन् । दशैंसम्ममा बस्ती निर्माण गरिसक्ने उनीहरुको योजना छ । बस्ती हस्तान्तरण भने दशैंपछि गर्ने धुर्मुसले बताएका छन् । बस्ती निर्माणमा खटिएका धुर्मुस जन्मदिनमा चाहिं के गर्दैछन् त ? ‘आज एक दिन छुट्टि मिलाएर घरमा आएको छु’ उनले भने, ‘बुढी हजुरआमा घरमा आउनु भएको छ । त्यसैले उहाँलाई भेट्न घरमा आएको हुँ । वर्षभरी काम गरियो एक दिन त घरलाई पनि समय दिउँ न ।’
गिरान्चौर बस्ती भ्रमणमा पुगेकी रेखा थापा र धुर्मुस । आफैंले निर्देशन गरेको छोटो बाल मैत्री फिल्म ‘ज्योती’ को विशेष शो राखेका धुर्मुसले आफ्नो पनि लगानीमा सहकार्य रहेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ हेर्ने पनि योजना बनाएका छन् । अभिनय र समाज सेवाबाट दर्शकको मन जितेका धुर्मुसको अबको योजना के छ त ? उनी सुनाउँछन्, ‘कलाकारितालाई निरञ्तरता दिदैं समाज अनि राष्ट्रको सेवा गरिरहने सोच छ ।’ उनलाई जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना !